Konke mayelana ne-Actovegin > Ukwelashwa nokuvimbela
Yini intental noma Actovegin engcono?
Kuyatholakala kwezentengiso Trental 400: inomphumela owohlala isikhathi eside (kwanele ukuthatha ithebhulethi elilodwa ngesigamu sosuku). I-Pentoxifylline ayinawo lo mphumela.
Izithonjana zeCavinton - UBravinton, uVinpocetine (Vinpocetine) nabanye (ojenene). Ikhiqizwe nguCavinton eHungary. UCavinton (isidakamizwa sokuqala) uvuselela imithambo yegazi yobuchopho, lithuthukisa ukulethwa komoya-mpilo ubuchopho, futhi likhuthaza ukusetshenziswa kweglucose.
I-Cavinton isetshenziselwa ukuphazamiseka okuhlobene nengozi ye-cerebrovascular, umfutho wegazi ophakeme, ukulahleka kwezindlebe, i-ophthalmology, njll.
Ungathola imininingwane yokuthi uCavinton uthathwa njengesengezo sokudla e-United States. Emazweni aseMpumalanga Yurophu ayasetshenziswa. Vumelanisa umuthi kusuka ku-alkaloid yesitshalo iPeriwinkle encane. Awekho amacala okudakwa kwezidakamizwa aqoshwe.
Iziguli ezisencane (ezineminyaka engama-35 - 50 nangaphansi) zivame ukunconywa ukungenelela kokuhlinzwa, asebekhulile, abanenqwaba yezifo ezikhona, banikezwa, njengomthetho, ukwelashwa okulondolozayo. Azikho izindlela zokwelapha ezifanele.
Ukwelashwa okulimazayo kwe-endarteritis kufaka phakathi, kubandakanya nokudla okwanele kwemithi:
lezi izidakamizwa ukwehlisa i-cholesterol yegazi (i-atherossteosis iyi-plaque eholela emazingeni aphakeme okuthiwa i-cholesterol emibi), kanye ne-nicotinic acid derivatives neminye imithi. Kusetshenziswa ekwelashweni kokulondolozwa (okunzima) futhi I-Trental ne-Actovegin.
Inkambo yokwelapha yanyanga zonke: Trental kabili kuya kathathu ngosuku for 400 mg umuthi. Funda ngomthamo nendlela yokusebenzisa i-Actovegin lapha.
Ungase futhi ujwayelane nokwelashwa kwe-endarteritis Actovegin neMexidol.
Kunencazelo ebanzi ye-pathology ephansi yemilenze - I-HINC. Ukugeleza kwegazi okunganele emilenzeni (futhi ngalo ukwephulwa komsoco wezicubu zemilenze) kungenzeka ngezizathu eziningi: i-atherossteosis ("ama-plaque" odongeni lwemithambo yegazi), i-endarteritis (ukuvuvukala kanye nokuqina kwemithambo yemilenze), i-hypoplasia ye-iliac kanye nemithambo esiswini, i-thrombosis (imithambo evalekile), ukungezwani kwesifo sikashukela, isimo ngemuva kokulimala komlenze (ukubanda nokuqina kwesikhumba semilenze, njll. .). Ngaphezu kwalokho, ngamaphesenti amabili wamacala, i-ischemia ebucayi ingenzeka.
A.M. UZudin et al. umsebenzi wesayensi "Umphumela we-Actovegin ku-hemodynamics ebambisene ezigulini." nge-HINK yenze ucwaningo lwezokwelapha futhi lwaphikisana nokuthi kuzo zonke izidakamizwa i-HINK yokwelapha umuthi osebenza kahle kakhulu I-Actovegin. Lokhu kuvivinywa bekubandakanya iziguli ezingamashumi amane nambili ezineminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu kuya kumashumi ayisishiyagalombili nambili.. Iziguli bezingasebenzisana ne-concomitant pathology.: I-DM, (engxenyeni yesithathu yeziguli), isifo senhliziyo (75%), i-hypertension (70%), nezinye. Iziguli ze-HINK zithole i-Actovegin monotherapy (izinqubo eziyishumi nanhlanu zesisombululo se-Actovegin sesisombululo se-isotonic sodium chloride). Ekupheleni kokungenelela, zonke iziguli zathola ukwelashwa ngomlomo nge-Actovegin. Iziguli ezingamashumi amathathu nesishiyagalombili ezibambe iqhaza ocwaningweni lomtholampilo zithi zazizizwa zingcono.
I-Actovegin (ithuthukisa ukuthuthwa koshukela nokusetshenziswa kwayo) isetshenziswe ngempumelelo ekwelapheni iminyaka eminingi i-ischemia engapheli. Lesi sifo esingathi sína sidlulela ezigabeni eziningana zokukhula (kusukela ekukhulunyweni ngezikhathi ezithile) futhi singaphetha ngokuba ne-gangrene uma ungaqali ukwelashwa ngesikhathi bese uyeka imikhuba emibi.
USolwazi E.I. Chukanova et al. (Russian State Medical University, eMoscow) esihlokweni esikhuluma ngokwelashwa i-encirchalatory encephalopathy(DE) ahlinzeke ngemininingwane evela eminyakeni eminingi yokubhekwa kwemiphumela yokuhlaziywa okuhleliwe okungahleliwe. Ucwaningo lolu lwalubandakanya iziguli ezingamakhulu amahlanu neshumi nesithupha. Ngaphezu kokwelashwa okuyisisekelo kwe-DE, ingxenye yesithathu yeziguli ithole ukwelashwa ngethebhulethi UCavinton (30 mg ngosuku), okwesithathu - kwifomu lethebhulethi Trental (400 mg ngosuku) nenye ingxenye yesithathu yeziguli yathola amaphilisi ayisithupha e-Actovegin ngosuku.
Inkambo yokwelashwa yathatha izinyanga ezimbili. Phakathi nonyaka, iqembu ngalinye leziguli lathola ukwelashwa okunqunyelwe kathathu. Ucwaningo lwenziwa iminyaka emithathu.
Ukutholwa bekule ngokulandelayo:
Kuwo womathathu amaqembu eziguli ezihlolwe nge-DE, ukuqina kwenkambo yesifo ngesikhathi sokwelashwa kwe-Actovegin ngokumelene nesizinda sokwelashwa okuyinhloko (okuyisisekelo) bekungaphansi kancane.
Kufakwe nasekwelapheni okuyinkimbinkimbi kwe-discirculatory encephalopathy izidakamizwa ezifana ne-Instenon neCortexin.
Ukwelashwa kwe-encephalopathy, umfutho wegazi ophezulu, njll .. ekwelapheni okuyinkimbinkimbi, iMexidol isetshenziswa ngempumelelo kanye noTrental noCavinton.
Esizeni sethu sesivele sibhale ngakho izinkinga ezinkulu zesifo sikashukela.
Manje sizobheka udaba lokusetshenziswa okuhlanganyelwe kwe-Actovegin neTrental ezimweni ezinzima unyawo lwesifo sikashukela ezigulini ezinjalo.
Zombili lezi zidakamizwa zingasetshenziswa ekwelapheni izinkinga ezinzima zonyawo lwesifo sikashukela.
Eqenjini lesibili, abantu abangamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye bebengaphansi kokuhlolwa (esibhedlela) esifundeni saseSaratov, lapho afikehlinzwa khona ngenxa yezinkinga ezinzima zonyawo lwesifo sikashukela. Womabili la maqembu eziguli athole ukwelashwa kwezinsuku ezintathu (esibhedlela esibhedlela) phakathi nonyaka.
Yiluphi usizo lokwelashwa olutholwe yilaba bantu abanesifo sikashukela?
Ungafunda kabanzi ngokusetshenziswa kwe-Actovegin ekwelashweni okuyinkimbinkimbi kweziguli ezinesifo sikashukela lapha.
Abafundi bethu bavame ukubuza Ngabe uCavinton uvunyelwe ekwelapheni isifo sikashukela. I-Cavinton iqukethe i-sorbitol, ngakho-ke, lapho usebenzisa i-Cavinton, kufanele kuhlolwe njalo izinga le-glucose egazini laleli qembu leziguli.
Ungase futhi ufune ukufunda izibuyekezo zabafundi bethu nge-Actovegin nangentengo yomuthi, ubuke isibuyekezo sevidiyo se-Acto vegin.
Endabeni ye-polyneuropathy, unyawo lwesifo sikashukela, amalungiselelo afana ne-Russianoxidant eyenziwe yaseMexico esetshenziswa nasekwelapheni okuyinkimbinkimbi. Lapha ungafunda kabanzi ngokusetshenziswa kweMexidol ekwelapheni le nkinga enkulu yesifo sikashukela.
Ukwakheka nenhloso ye-Actovegin
I-Actovegin isuselwa kumaprotheni futhi aqukethe ama-peptides emvelo, agaya kalula, ama-derevyat. Kutholakala ngesimo samathebulethi, ama-ampoules, isixazululo sokufakwa, ijeli. Umuthi usetshenziselwa ukwelapha, ukuqeda imiphumela:
Imithambo ye-varicose yezinyawo,
ngezinguquko ezicutshini zobuchopho, izicubu zenhliziyo,
ngokukhulelwa okuyinkimbinkimbi nangosongo lokuphuphuma kwesisu, ukukhula kancane nokukhula kwe-ovum,
ngomonakalo ojulile wezendlalelo zesikhumba (ukushiswa, ukuhlukunyezwa, izilonda ngokutheleleka kwe-epithelium, njll.).
Ngokuvamile, umthamo wohlelo lokusebenza mkhulu futhi unqunyelwe kubantu abaneminyaka engama-20 kuye kwengama-70 ukwelashwa okuyinkimbinkimbi, ukuvikela imiphumela yesifo noma ukuphazamiseka, kanye nokuvinjwa kwalezi zifo nezinkinga.
Ukwakheka nenhloso yeTrental
I-Trent analogue ye-Actovegin, kodwa ebiza kakhulu kuphela (kusuka kuma-ruble angama-400). Iphakheji eli-1 liqukethe - amaphilisi angama-60, noma ama-ampoules angama-20, noma amaphilisi angama-60. I-Trental iqukethe i-pentoxifylline (100 mg), i-silicon dioxide, i-talc, i-lactose, i-magnesium stearate.
Nikeza umuthi we:
ukungasebenzi kahle kwemithambo, imithambo ye-varicose,
isigebengu, ukusha, izibazi,
ukungazinzi kohlelo lokujikeleza, njll.
Okuphumelela kakhulu umjovo ekwelapheni imithambo ye-varicose, izicubu zezicubu.
Isici esibalulekile izindleko zezidakamizwa - I-Actovegin ishibhile kuneTrental, kepha eyokugcina inamandla ngokusebenza,
I-Trental yenziwa ngokwakhiwa futhi isebenza ngokujulile ngangokunokwenzeka, ipholisa ngokuphelele izicubu ezithintekile, izitho, amasistimu. Izidakamizwa ezibuthakathaka zingasusa imiphumela yezifo, zivimbele ukuvela kwazo, noma kunjalo, umuthi awukwazi ukwelapha ngokuphelele lesi sifo futhi uqede ukungaphatheki kahle isikhathi eside,
Ubuningi obukhulu be-Actovegin ngumthamo wokusetshenziswa kwansuku zonke. Kumele kuthathwe izikhathi ezi-3 ngenani lamaphilisi amabili, iTrental idliwa ngobuningi emahoreni angama-24.
Ama-Trental ne-Actovegin dropers ayenziwa ngezifo ezithinta i-vascular and neva system, lapho kukhona khona i-osteochondrosis yesibeletho esigulini, ukwenza ngcono ukujikeleza kwegazi emkhakheni wokucindezelwa kwezinzwa, ukondliwa kwamaseli e-cartilage ne-cartilage ngamavithamini, ama-asidi. I-Droppers inikezwa isiguli izikhathi ezi-2 ngosuku, noma ngesivumelwano nodokotela ohambelayo. Thola isikhathi sokufaka ngokwakho ama-droppers ngokwakho akusebenzi, kufanele uphuze amaphilisi noma usebenzise ijeli.
Ngokusekelwe ekutheni izidakamizwa zingafakwa ndawonye, ​​khona-ke mayelana nokuhambisana kweTrental ne-Actovegin konke kuyacaca. I-analogue yalezi zidakamizwa ezimbili yi-aminophylline, engasetshenziswa ngasikhathi sinye nezindlela zokwelapha okuxoxwe ngazo.
Ukuqhathanisa amalungiselelo we-Trental ne-Actovegin, kwanele ukuzama zombili esenzweni futhi uthathe isinqumo sokuthi imuphi umuthi ophumelela kakhulu futhi ongadali ukujabha ngenkathi uthatha.
Vidal: https://www.vidal.ru/d drug/actovegin__35582
Izifo ezisetshenziselwa izidakamizwa
I-Actovegin neTrental yizidakamizwa ezinhle kakhulu zokulwa nezifo zenhliziyo, zingasetshenziswa ngasikhathi sinye. Lokhu ngeke kubangele noma yimiphi imiphumela emibi, kepha vele uthuthukise izakhiwo eziwusizo zemithi.
Ukwelapha kungahlanganiswa futhi kube munye. Kwesinye isikhathi, kwizifo ezahlukahlukene, kusetshenziswa umuthi owodwa noma omunye. Kuya ngomphumela udokotela afuna ukukufeza. Kepha, njengomthetho, lezi zinto zisebenza kuphela.
Uma izinkinga zokujikeleza kwegazi zihambisana nesifo sikashukela, i-Actovegin iba umuthi wokukhetha. Izibonakalisa ngokuphelele ekwelapheni i-angiopathy yemithambo. Kukhulunywa kakhulu ngesikhathi sonyawo lwesifo sikashukela.
Lesi simo singavinjelwa kalula uma uthatha ukwelashwa nge-prophylactic nalesi sidakamizwa kabili ngonyaka, ngenkathi uya esibhedlela ngaphansi kokuqashwa kodokotela abaqeqeshiwe.
Isifo sikashukela sibangela i-macro ne-microangiopathy. Lokhu kuholela ekwakhekeni kwama-atherosulinotic plaque. Bangakwazi ukuvimba umkhumbi ngokuphelele noma ingxenye. Kulokhu, iziguli zikhathazekile ngobuhlungu obukhulu emaphethelweni aphansi, ukuvuvukala okunzima nokubomvu kwesikhumba.
Ukwehla kwezinga lokushisa, izinhlungu nokuzwela kokudlidliza kuzokhuluma ngokungezwa kwe-polyneuropathy. I-Actovegin inomphumela omuhle kakhulu we-neuroprotective, ofanele lapha.
Imvamisa, iTrental isetshenziswa ukwahlula izakhiwo ze-venous. Lokhu kuvunyelwe ngomphumela oqinile we-vasodilating, okunciphisa ingcindezi embuthanweni wegazi wokujikeleza kwegazi.
Iziguli zikhononda ngobuhlungu obukhulu emilenzeni, ukuvuvukala, imithambo engaphezulu kwethambile emlenzeni ongezansi. I-Pentoxifyline ingazisusa kalula lezi zimpawu. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sinomphumela wokuqongelelwayo, ngakho-ke ngeke kube nomphumela kusuka ku-dropper eyodwa. Kuyadingeka ukuthola ukwelashwa okuvikelwayo okuhleliwe ngemodi yokuma. Ngenxa yezakhi zayo ze-antiplatelet, kunciphisa ubungozi bokuqhekeka kwegazi. Ngenxa yalokhu, kungcono kakhulu ekwelapheni i-thrombophlebitis ne-vein ejulile ne-arterial thrombosis.
Izifo lapho kunconyelwa khona ukwenza ukwelashwa okuhlanganyelwe ngalezi zidakamizwa:
i-venous trophic ulcer yesitho esingaphansi,
isifo sikashukela polyangioneutropathy,
Isifo sikaRaynaud noma i-angioneuropathy,
isibonda esomile nesimanzi,
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa okuhlanganisiwe kuyanconywa futhi ukuthola ukutholakala kokuhluleka kokujikeleza kwe-venous circulatory.
Indlela yokusebenzisa, umthamo
Kufanele uqaphele ikakhulukazi mayelana ne-Actovegin neTrental. Ungazindli. Lokhu kungaholela emiphumeleni emibi. Zikhona ngezindlela ezimbili - ama-dragees nama-ampoules anezinto eziwuketshezi.
Ekwelashweni okungapheli, umuthi osesimweni se-ampoules uthambekele ngaphezulu. Ngesikhathi somzila wokudonsa umuthi wokufaka umuthi, udonswa ngokushesha bese usebenza ngqo endaweni ethintekile.
Actovegin iyatholakala ezinguqulweni eziningana. Kunama-ampoules ezinhlobo ezahlukahlukene. Okuncane kunakho konke kungamamililitha amabili, kukhona angamashumi amabili nanhlanu kuwo ephaketheni. Umamililitha owodwa uqukethe ama-milligram angama-40 wento eyomile. Kukhona futhi ongakhetha ngokuthenga kwama-ampoules wamamililitha ayi-5 no-10. Esikhathini sephakheji sezilwane ezinjengalezi yizicucu ezinhlanu.
Iziqukathi ezinkulu zitholakala kalula kumithamo ekhuphukayo. Kulula kubasebenzi abezimo eziphuthumayo ukubala umthamo bese begcwalisa i-dropper. Umuthi uhlanjululwe ngamamililitha ayisigidi kasawoti. Kufakwa emgodini we-peripheral or central. Izinga lokuphatha akufanele lidlule amaconsi angama-60 ngomzuzu.
Umthamo kuncike lesion. Ngesikhathi sokushaywa imivimbo, izinsimbi eziyimililitha eziyi-10 zinqunywa ukuthi zibhidlize ngaphakathi amasonto amane. Donsa kanye ngosuku. Ukwelashwa kwe-angiopathy ye-arterial, odokotela banquma ngaphakathi kwama-milliliters angama-20-50, okumele axutshwe ku-400 ml we-sodium chloride. Faka nsuku zonke inyanga. Isifo somlenze we-Varicose sidinga ama-milliliters ayi-10 kuphela ngosuku, ngeviki, ukuvikela izilonda ezisesicubu segazi.
I-Trental itholakala kuphela kuma-ampoules ama-milliliters ayi-5, kwiphakeji yezingcezu ezi-5. Kuyiqiniso, ukukhetha imvamisa yokuphatha kanye nomthamo kuncike kudokotela ohambelayo. Njengomthetho, kuphathwa ngabazali, ukusheshisa imiphumela emihle. Ungahlanganiswa ne-saline noma ne-Ringer lactate ne-5% ushukela.
Umthamo kuncike kulokho isifo. Njengomthetho, akukho ngaphezu kwe-600 mg. Faka umfutho kumamililitha ayi-500 wesisombululo. Isingeniso kufanele sithambe. Imiligramitha eyi-100 yento eyomile ihanjiswa ngaphezulu kwemizuzu engama-60. Ngenxa yokuphazamiseka okubanzi kwethrophic, iPentoxifyline ingadonswa amahora angama-24.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi umthamo omkhulu wansuku zonke akufanele udlule ku-1200 mg. Ukubala lokhu kulula kakhulu, kuthatha u-0,6 mg ngekhilogremu ngayinye ngehora. Isibonelo, umuntu onesisindo esingu-70 kg kufanele athole ama-1000 mg ngosuku.
Ama-analog, imiphumela emibi kanye ne-contraindication
Kunenombolo encane kakhulu yokuphambana. Okubaluleke kakhulu ukungabekezelelani kulo muthi. Kujwayelekile kubo bonke, ngaphandle kokungafani. Uma ngaphambi kwalokho, isiguli besingazi ngaye, kepha sakhula ngesikhathi sokufakwa, ukuphathwa kufanele kumiswe ngokushesha.
Ku-Actovegin, ukuphikisana okubalulekile yi-edema yamaphaphu ne-cerebral edema, ukuhluleka kwenhliziyo, i-oliguria. Sebenzisa ngokuqapha uma kukhona ukucabanga kwe-hyperhydrate yomzimba. Akukho ukuhlola okukhombise ukweqisa kwalo muthi okungenzeka. Imiphumela emibi ingafaka i-dysbacteriosis, i-dermatitis ye-allergic, i-urticaria, ukugabha, isifo sohudo, ukuqunjelwa, i-tachycardia, izinhlungu enhliziyweni. I-analogue nguLivian, uPantestin. Intengo icishe ibe ngama-ruble angama-800-1000.
I-Trental i-contraindication ezigulini ezinokopha okuqalile, e-infraction ye-myocardial acute, ene-hemorrhagic diathesis. Phakathi kokusabela okungekuhle, i-tachycardia, i-arrhythmia, i-urticaria, i-cholestasis, isicanucanu, ukugcotshwa kwemibala kuhlukaniswa. Analogs yilezi: Latren, Agapurin. Intengo ephakathi isuka kuma-ruble angama-300 kuye kwangama-500.
Mayelana ne-Trental yezidakamizwa kanye nezimpawu zayo zichazwe kuvidiyo kule ndatshana.
I-Mexicoidol noma i-Actovegin - okungcono
IMexidol isizukulwane esisha sama-antioxidants. Isidakamizwa sithuthukisa inqubo yokusebenza kwengqondo, ukunikezwa kwegazi ebuchosheni, kuvikela amaseli ngokuthembekile emiphumeleni yezinto ezinobuthi eziyingozi ezenziwe ngenxa yokulimala okungafanele.
IMexidol inemiphumela elandelayo:
I-Nootropic - isebenzisa umsebenzi wokukhumbula futhi ithuthukise ikhwalithi yomsebenzi wengqondo,
I-Hypolipidemic - ijwayelekile i-cholesterol yegazi,
I-anticonvulsant futhi evusa amandla
I-antihypoxic, iqeda indlala yomoya-mpilo yezicubu, igcwalise umoya-mpilo.
Ngokungafani neMexidol, i-Actovegin ine-neuroprotective, regenerative and antihypoxic effect. IMexidol ene-Actovegin isetshenziselwa ukwelapha ukuphazamiseka okuhlukahlukene kwemizwa.
Ngenxa yokuthi i-mexidol ithuthukisa izinqubo ze-metabolic ngenxa ye-lactose yayo, umuthi unciphisa ukuthambekela komuntu ezimweni ezicindezelayo. Lo muthi usetshenziswa ngokuzimela ekwelashweni kwengqondo ekwelapheni izimpawu zokuhoxiswa kotshwala futhi ukhulule izimo ezihambisana nokuvela kokukhathazeka kwangaphakathi. I-Actovegin kuleli cala ayisetshenziswa.
Uyini umehluko phakathi kwe-solcoseryl ne-actovegin
Kunzima ukuphendula umbuzo wokuthi yikuphi okungcono - i-solcoseryl noma i-actovegin, ngoba le mithi ingama-analogues. Zombili lezi zidakamizwa zilungisa izicubu ngokuzigcwalisa nomoya-mpilo. Into esebenzayo yazo zombili lezi zidakamizwa ifundiswa egazini lethole, elivele lakhululwa ngaphambili kumaprotheni.
Odokotela esibhedlela saseYusupov banquma le mishanguzo uma kutholakala izinkomba ezilandelayo:
Ingozi yesikhashana yokungasebenzi komzimba,
Izilonda eziyingozi zesikhumba,
Ukuphazamiseka kwemetabolic kuhlobo 2 sikashukela mellitus,
Izilonda zokucindezela, izilonda eziyizithutha,
Burns kwesikhumba semvelaphi ehlukahlukene.
Umuthi unqunyelwe ukuvimbela ukulimala kwemisebe ezigulini ezinomdlavuza ezelashwa ngemisebe. Yisiphi isidakamizwa ukunquma, i-solcoseryl noma i-actovegin, udokotela unquma kanye nesiguli.
Yikuphi okungcono - i-Actovegin noma uCavinton
I-Actovegin ne-cavinton banezinto ezahlukahlukene ezisebenzayo kanye nendlela yokusebenza. Into esebenzayo ye-Actovegin ingukukhishwa kwemvelo egazini lamathole, kuhlanziwe ngamaphrotheni. Umuthi uthuthukisa izinqubo ze-metabolic, wenza kusebenze ukutholwa kwe-oxygen ne-glucose ngamangqamuzana. Isithako esikhulu esisebenzayo se-cavinton yi-vinpocetine yamakhemikhali, esiza ukwandisa ukugeleza kwegazi futhi sigcwalise ubuchopho nazo zonke izinto ezidingekayo ngenxa yokuqabuleka kodonga lwe-vascular.
Imiyalo esemthethweni ayinalo ulwazi ngokuhambisana kwe-Actovegin neCavinton. Imvamisa musa ukusebenzisa zombili izidakamizwa ngasikhathi sinye. Isinqumo sokusebenzisa uCavinton kanye ne-Actovegin ngasikhathi sinye senziwa odokotela esibhedlela saseYusupov bebonke lapho kukhona izinkomba ngazinye. Izindleko zezidakamizwa zehlukile. Intengo ye-Actovegin iyahlukahluka kusuka kuma-ruble angama-600 kuye kwangama-1600, uCavinton angathengwa ekhemisi ngentengo yama-ruble angama-290-690.
Izimpendulo zemibuzo yesineke
I-Actovegin noma i-cortexin - okungcono? Zombili lezi zidakamizwa zenziwa ngezinto zemvelo. Indlela yokusebenza ye-cortexin ayihlukile emiphumeleni yamakhemikhali ye-actovegin. ICortexin iqukethe i-glycine njengesithako esingeziwe. Le yi-amino acid ethuthukisa umsebenzi we-cortex ye-cerebral futhi ithuthukisa umphumela we-cortexin we-neurotropic.
Yini engcono ukuyisebenzisela i-cerebral vascular pathology - i-cerebrolysin noma i-actovegin? Isithako esikhulu esisebenzayo se-Actovegin igazi elikhishwe inkonyane elihlanzwa ngamaprotheni. ICerebrolysin iqukethe inkimbinkimbi yama-peptides asuselwa ebuchosheni bengulube. Zombili lezi zidakamizwa zingokwemvelo, zinomphumela ofanayo futhi ziyasetshenziswa uma zinezimpawu ezifanayo. I-Cerebrolysin itholakala kuphela njengomjovo futhi isetshenziselwa ukubuyisa izicubu uma kulimala isikhumba nezicubu ezingaphansi.
I-Trental noma i-Actovegin - okungcono? Ama-Actovegin ne-trental asetshenziswa ku-pathology yemikhumbi e-cerebral and peripheral. I-Actovegin ilungiselelo lemvelo. Isithako esikhulu esisebenzayo se-trental yi-pentoxifyline. I-Trental isetshenziselwa ukunakekelwa okuphuthumayo nokwelashwa okuhleliwe. Imiphumela ye-Actovegin ayenzeki ngokushesha ngemuva kokulawula umuthi.
Uma usenombuzo, okungcono - Actovegin noma ama-analogues akhe, shayela. Yenza isikhathi sokubonana ngesikhathi esivumelana nawe. Odokotela esibhedlela saseYusupov bazokusiza ukuthi ukhethe umuthi ongcono kakhulu, umthamo kanye nendlela yokuphatha.
Isithako esisebenzayo kulo muthi yi-pentoxifylline. Le nto inciphisa izinga le-calcium ezakhiweni zamaselula, i-AMP ijwayelekile futhi ikhuphule ukuqina kwe-ATP kumaseli abomvu egazi. Umuthi unomsebenzi we-antihypoxic oshiwo, ochazwa ngokwanda kwemithambo yemithambo yegazi. Ngenxa yalokhu, kukhona ukwanda kwephimbo lemisipha yokuphefumula kanye ne-vasel lumen emaphashini, okuholela ekushayweni komoya kwegazi.
Ngaphezu kwalokho, umuthi unezenzo ezilandelayo:
ijwayele ukuhamba kwegazi, inciphise ukubonwa kweplatelet ku-serum yegazi,
kunciphisa amathuba okushintsha kwe-pathological kumaseli abomvu egazi,
kukhuphula ukwethuka kanye nomthamo wegazi elichithekile, ngaphandle kokusebenzisa noma imuphi imvamisa yokuqina kwemisipha yenhliziyo,
unomphumela onenzuzo ekusizakalweni kohlelo lonke lwezinzwa oluphakathi,
isusa izinhlungu nobuhlungu obuqine nge-stenosis yemithambo yegazi.
Ngenxa yalezi zakhiwo ze-pharmacotherapeutic, umuthi uthole insiza ekwelapheni nasekuvimbeleni i-pathologies eminingi. Izinkomba eziphambili zokusebenzisa umuthi:
Ukuvinjwa kwama-microcirculation pathologies ngezindlela ezingamagciwane ze-neuroinfections kanye ne-ischemia yamangqamuzana,
ukuphazamiseka kokuhamba kwegazi ngenxa ye-pulmonary edema,
ukulimala kwengqondo kwe-atherossteotic,
ushintsho lwe-pathological endlebeni ephakathi lubangelwa ukuphazamiseka kwemithambo endaweni yendlebe yangaphakathi,
ukungahambi kahle okubangelwa i-vascular pathologies,
i-pathology yokujikeleza kwegazi emilenzeni.
Umuthi wenziwa ngezindlela zokulawulwa kwabazali noma ngomlomo. Ithebhulethi eyi-1 iqukethe u-100 mg wesithako esisebenzayo, isisombululo sokufakwa - 100 mg ku-1 ampoule.
I-contraindication eyinhloko yokuthatha umuthi:
ukujikeleza kokujikeleza kohlelo lwezinzwa nenhliziyo,
ukungabekezelelani ngakunye kwe-pentoxifylline nalabo abathola ukwakheka komuthi,
I-contraindication eyinhloko yokuthatha i-Trental yisifo se-porphyrin.
Ngezilonda zesisu, i-hypotension, futhi ngesikhathi sokululama ngemuva kokuhlinzwa, umuthi unqunywe ngokucophelela.
Umphumela wokwelapha wesidakamizwa usekelwe emsebenzini we-metabolic ne-antihypoxic wento esebenzayo - okukhishwa kwigazi lethole. Lesi sithako sikhishwa kusetshenziswa ubuchwepheshe bokuhlunga nge-microparticle kanye ne-dialysis technology.
Umuthi unezenzo ezilandelayo:
kuthuthukisa ukuthuthwa komoya-mpilo ezinhlotsheni zamaselula zohlelo lwezinzwa oluphakathi, izicubu zenhliziyo nezicubu zezicubu,
ithuthukisa ukucubungula i-carbohydrate ngokunciphisa amazinga e-lactate,
iguqula isimo se-cytoplasmic membranes ngesikhathi se-hypoxia,
kwenyusa izinga lama-macroergs.
Izindlela eziningi zokwelapha zomuthi i-Actovegin zenza sikwazi ukuyisebenzisela izifo eziningi. Izinkomba eziphambili zokuthatha umuthi:
ukuphazamiseka kokujikeleza kwesistimu yezinzwa ephakathi nendawo ngemuva kokufakwa emzimbeni nokulimala kobuchopho kobuhlungu,
ukuphazamiseka kokunikezwa kwegazi emithanjeni ye-CNS ezifweni zomgogodla,
ukwelashwa okuhlala isikhathi eside kokushiswa, izilonda namanxeba uma kwenzeka kuphazamiseka amasistimu wenhliziyo ne-endocrine,
ukumiswa kwesikhumba, ulwelwesi lwamafinyila kanye nezitho zomzimba.
Kwesinye isikhathi kubekwa umuthi ngokwephula inkambo yokukhulelwa. Umuthi wenziwa ngendlela yesisombululo somjovo, ijeli, uwoyela noma amaphilisi.
Umuthi uhambisana ngokuphelele nezinye izidakamizwa ze-metabolic ne-antihypoxic, kepha akunconywa ukuzixuba ku-dropper eyodwa.
Ukuxhumana ngokusetshenziswa komuthi:
ukungabekezelelani okuthile ezintweni kusukela ekwakhekeni komuthi,
isigaba esingafakwanga sokwehluleka kwenhliziyo,
Izinkinga zokususa uketshezi,
Ukuqapha umuthi kufanele usetshenziswe ngokweqile kwe-sodium ne-chlorine, kanye nesifo sikashukela.
I-Actovegin isetshenziselwa i-thrombosis kanye ne-circulatory pathology yesistimu yezinzwa ephakathi nendawo ngemuva kokuqunjelwa yi-cerebral kanye nokulimala kobuchopho kobuhlungu.
Ngokuphikisana nesizinda somuthi wokwelashwa, ukubonakaliswa komzimba kanye nokugcinwa kokulamanzi kwesinye isikhathi kungenzeka.
Kungenzeka yini ukuthi ungene esikhundleni seTrental Actovegin?
Imithi ye-Actovegin ne-Trental ingasusa enye esikhundleni sokubonakaliswa komzimba esigulini ngento eyodwa noma enye esebenzayo. Kodwa-ke, udokotela ofanele kuphela okufanele enze lokhu.
Uma isiguli sinokuphikisana kokuthatha i-Trental, khona-ke kanye ne-Actovegin, Mildronate, iMexidol kanye nezinye izidakamizwa okuhloswe ngazo ukukhuthaza ukuhamba kwegazi kunqunyelwe ngaphezu kwalokho.
Yini engcono - Trental noma Actovegin?
Inzuzo yomuthi weTrental ukuthi ukusebenza kwawo kuqinisekiswa yizilingo eziningi zokwelashwa. Izici ze-pharmacokinetic kanye ne-pharmacodynamic zalesi sikhungo zifundwe ngokucophelela ngangokunokwenzeka, okwenza sikwazi ukukhetha kahle irejimusi yemithamo icabangela ukutholakala kwezifo.
Ukwelashwa nge-Actovegin akufakiwe kumaphrothokholi amukelwe emazweni amaningi athuthukile. Ngaso leso sikhathi, abanye odokotela baphawula imiphumela yaso emihle ekususweni kwe-hypoxia kanye nezinqubo ze-microcirculation. Amacwecwe nezixazululo zalo muthi zithathwa njengeziphephile, ngakho-ke, zingasetshenziswa kuma-pathologies ashubile wokujikeleza kwegazi, ukuncelisa ibele kanye nokuthinta komzimba.
U-Alena Mishina, oneminyaka engama-43 ubudala, eSt
Nginomsebenzi wokuhlala phansi. Kulokhu, muva nje ngibe nekhanda nesiyezi. Udokotela wahlonza i-osteochondrosis yomlomo wesibeletho futhi wabeka i-Trental. Kodwa-ke, ngaba nokungezwani nalo muthi. Ngenxa yalokho, udokotela unqume i-Actovegin ne-Mildronate ekuphathweni kwezifundo. Ngemuva kokwelashwa okunjalo, izimpawu ziyanyamalala ngemuva kwezinyanga ezingama-6-9. Enye yezingqinamba ukuthi lapho inj inj, umfutho wegazi lesiguli uyancipha bese kuba nesiyezi.
UGalina Vasilyeva, oneminyaka engama-32, Perm
Ngenkathi ngine-TBI, udokotela wanquma i-Actovegin. Ingabe ukujova izinyanga ezingama-3-4. Imiphumela emihle yomuthi ibonwa ngaphakathi kwezinsuku ezingama-2-3 ngemuva kokuqala kokusebenza. Izindleko zingifanele ngokuphelele.
Ukubuyekezwa kodokotela mayelana neTrental ne-Actovegin
U-Egor Timoshenko, neurosurgeon, oneminyaka engama-33, uVladimir
Zombili lezi zidakamizwa zisebenza kakhulu. Kodwa-ke, i-Actovegin ibhekwa njengephephe kakhulu, ngakho-ke ingasetshenziselwa i-lactation nokukhulelwa.
U-Olga Semenovna, udokotela wezifo zemizwa, oneminyaka engu-51 ubudala, uSaratov
Iziguli ziqaphela izindleko ezingabizi futhi ziveze umphumela wokwelapha wemithi yomibili.
Izimbangela nokubonakaliswa kwe-osteochondrosis
I-Osteochondrosis yenzeka ngenxa yezizathu eziningi, futhi ochwepheshe bebengakakwazi ukuthola ukuthi iyiphi yazo enikeza ukuqala kwe-pathology. Okwamanje, bahlukanisa izici eziningana ezivame ukubonwa ekuhlonzeni lesi sifo:
I-Congenital, ifa le-pathologies yesistimu ye-musculoskeletal
Izifo ze-Autoimmune ezidala ushintsho lwamathambo
Ukulayishwa okuvame kakhulu ngokomzimba
Ukuntuleka kokuzivocavoca, ukuswela ukuzivocavoca.
Ngaphezu kwalezi zinto eziphambili, izici zangaphandle zingathinta ukuqala kwesifo. Isimo esiyingqayizivele se-osteochondrosis ukuthi emabangeni okuqala azenzi ukuthi uzizwe, ngakho-ke isiguli asisoli ngalesi sifo, futhi sinxusa udokotela kuphela ngokubonakala kwezinhlungu ezijwayelekile. Ungahlulela i-pathology ngezibonakaliso ezilandelayo:
Ubuhlungu bekhanda obujwayelekile
Ubuhlungu emhlane, ukunwebeka entanyeni noma emuva phansi
Ubomvu, ukuvuvukala endaweni ye-lesion.
Ukuboniswa kwe-osteochondrosis kuncike ekwindini yezinqubo ezonakalisayo, isigaba sesifo, kanye ne-pathologies ekhona esigulini. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukukhomba lesi sifo ngesikhathi bese uqala ukusilapha ukuze umise ukuqhubeka kwawo.
Kungani i-Actovegin inqunyelwe futhi nini
Umuthi uvame ukubekelwa ekwelapheni i-osteochondrosis, ngoba inamandla okunciphisa ngokushesha izinhlungu futhi uthuthukise ubuchopho, uqede ikhanda, isiyezi.
Umphumela wokwelapha we-Actovegin utholakala ngokubonga ngengxenye yawo esebenzayo - i-hemoderivative encishisiwe etholakala egazini lethole. Umuthi ukhombisa izakhiwo ze-antihypoxic, unezenzo eziningana ezibalulekile ngasikhathi sinye: metabolic, neuroprotective, microcirculatory. Umuthi uphakamisa ukumuncwa kanye nokusetshenziswa komoya-mpilo, unomthelela omuhle ekulethweni nasekufisweni kweglucose, okuthinta kahle amandla we-metabolism wamaseli futhi kunciphise ukwakheka kwe-lactate.
Ngaphezu kwalokho, i-Actovegin ithinta kahle ukusebenza kwe-NS esezingeni eliphakathi kanye ne-peripheral. Ukuthuthukisa i-microcirculation yegazi kutholakala ngokwandisa ijubane lokuhamba kwegazi kuma-capillaries ngokuqiniswa kwama-arterioles, capillary sphincters.
Ucwaningo oluningi luveze ukuthi umphumela wokusetshenziswa kwe-Actovegin uvela engxenyeni yehora, kuyilapho umphumela wokwelapha ophakeme ngemuva kokuthi umjovo ufinyelelwe ngemuva kwamahora ama-3, ngemuva kokuthatha amaphilisi azibonakalise ngawo ngemuva kwamahora we-2-6.
Indlela yokusebenzisa i-Actovegin
Umuthi uyatholakala ngezindlela eziningi zemithamo - izixazululo zomjovo, amathebulethi, okokugcoba, ama-gels, okuvumela ukuthi i-Actovegin isetshenziselwe i-osteochondrosis ngamazinga ahlukahlukene obukhulu.
Ngokwesilinganiso, isikhathi sokwelashwa siyizinsuku eziyi-10, kepha ezimweni ezinzima singandiswa.
Esigabeni esibi, umuthi unqunywe ngomjovo ukuze ususe ngokushesha ukuqina kokuvuvukala. Ngokuya ngobunzima be-osteochondrosis, udokotela angakunquma ukuphathwa kwe-m / iv noma i-iv. Uma i-Actovegin isetshenziswa okokuqala, kunconyelwa ukuthi kwenziwe ukuhlolwa kokungezwani kuqala nokubheka ukuthi isidakamizwa siyakwazi yini ukubekezelela umzimba.
Ekuqaleni kokwelashwa, kusetshenziswa umthamo we-10 kuya ku-20 ml, osetshenziswa nsuku zonke, ngemuva kokuthi isikhathi esibuhlungu sehla - ama-5 ml nsuku zonke noma kanye njalo ezinsukwini ezimbalwa. Ukuze uvimbele i-tachycardia kanye nokukhuphuka komfutho wegazi, isixazululo sikhishwa ngejubane eliphansi.
Lapho unquma ama-infusions ekwelapheni i-osteochondrosis, umuthi uhlanganiswa ne-200-300 ml yesisombululo se-isotonic sodium chloride noma isisombululo se-5% kashukela. Izinga lokuncoma lokuphatha lingu-2 ml ngomzuzu.Kuma-droppers, kusetshenziswa umthamo wansuku zonke we-200 kuya ku-400 mg. Inqubo yenziwa kanye ngosuku.
Ngezinhlobo ezinobunzima be-osteochondrosis, i-Actovegin inconywa ukuba ithathwe ngomlomo. Iithebhulethi ezivela ku-osteochondrosis zidakwa ngokuphelele kathathu ngosuku, ngokwesilinganiso, izingcezu ezi-1-2.
Imiphumela emibi nokuphikisana
I-Actovegin ingenye yalezo zidakamizwa ezingandile ezinobuncane be-contraindication nemiphumela emibi, futhi ihamba kahle neminye eminye imithi.
Umuthi uvame ukubekezelelwa kahle, kepha noma kunjalo, njenganoma yiluphi ikhambi, ungadala imiphumela emibi:
Izilonda ngazinye, i-urticaria, ukwethuka
Akuvamile, ubuhlungu bemisipha.
Iziguli ezinokulandelayo kufanele zenqabe ukuthatha umuthi ukuze uthuthukise ukuhamba kwegazi ku-osteochondrosis:
Izinga eliphakeme lokuzwela ngakunye kwezakhi
Ukwehluleka kwenhliziyo okubolile
Izingane nentsha (kuze kube iminyaka engu-18)
Ukungasebenzi kahle kwamalungu omzimba (ukuphuma komchamo onciphile, ukungangeni komchamo esinyeni).